संसारमै धेरै कमाउने 'यूट्युब स्टार'... :: चेतना गुरागाईं :: Setopati
संसारमै धेरै कमाउने 'यूट्युब स्टार' सूचीमा ६ वर्षीय रेयान
काठमाडौं, पुस १ (सेतोपाटी)
कल्पना गर्नुहोस्, ६ वर्षको बच्चाले व्यवसायिक काम गर्न सक्छ? कमाउन सक्छ? कमाइ हाले पनि कति रूपैयाँ कमाउला?
यी सबको जवाफ दिएका छन् रेयान नामका बालकले जो मात्रै ६ वर्षका छन्। उनी यूट्युबका ‘स्टार’ हुन् जो हरेक हप्ता यूट्युबमा खेलौनाको समीक्षा गर्छन्। उनको च्यानल हिट छ र यसबापत् उनका अभिभावकले मोटो रकम थाप्दै आएका फोर्ब्स पत्रिकाले जनाएको छ। रेयानले गत वर्ष १ करोड १० लाख रूपैयाँभन्दा बढी कमाइ गरेका थिए।
रेयानको ‘रेयान ट्योज रिभ्यु’ च्यानलका भिडियो करोडौंपटक हेरिएका छन्। यो च्यानलमार्फत् उनले आफ्ना दर्शकलाई खेलौनाको ‘छुट्टै संसार’ लैजाने टिप्पणी विश्लेषकले गरेका छन्। सन् २०१५ बाट सुरु भएको उनको च्यानलका भिडियो हालसम्म १६ अर्बभन्दा बढी पटक हेरिएका छन्।
फोर्ब्सले उनलाई सन् २०१७ मा संसारमै धेरै आम्दानी गर्ने यूट्युब स्टारको सूचीमा राखेको छ।
कम उमेरमा सबभन्दा धेरै कमाउनेमा रेयानका बारेमा धेरै जानकारी भने नभएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्। उनको थर के हो र कहाँ बस्छन् भन्ने पनि आधिकारिक जानकारी छैन। उनी अमेरिकाका हुन् भन्ने चाहिँ पुष्टि भएको बताइएको छ।
केही दिनअघि रेयानकी आमाले अमेरिकी अखबार वासिङटनपोस्टलाई एक अन्तर्वार्ता दिएकी थिइन्। त्यसमा उनले रेयानका बारेमा थोरै कुरा बताइन्। ‘रेयान सानै उमेरदेखि खेलौनाको सौखिन थियो,’ उनले भनिन्, ‘ऊ टिभी र यूट्युबमा आउने रिभ्यु हेर्थ्यो। तीन वर्ष छदैंदेखि उसको यसमा लगाव छ।’
रेयानकी आमाले पनि आफ्नो परिचय दिन मानिनन्। ‘उसले मलाई सानैदेखि गनगन गर्थ्यो,’ उनले भनिन्, ‘म अरू बच्चा जस्तो यूट्युबमा किन देखिन्नँ भन्थ्यो। त्यसपछि हामीले उसलाई यो सम्भव छ बाबु भनेर सम्झायौं र खेलौना किन्न गयौं। पहिलोपटक हामीले उसलाई एक रेल किनिदियौं र यहीँबाट यो सब सुरु भयो।’
रेयानको एउटै भिडियो ८० करोडभन्दा बढीले हेरेका छन्। मार्च २०१५ मा सुरु भएको उनको च्यानल सन् २०१६ जनवरीसम्म आइपुग्दा १० लाखभन्दा बढीले ‘सबस्क्राइब’ गरिसकेका थिए। हाल एक करोडभन्दा बढी सबस्क्राइबर छन्।
भिडियोः रेयान ट्योजरिभ्यु
प्रकाशित मिति: शनिबार, पुस १, २०७४, १२:५५:५४
ट्याक्सी चालकहरूको प्रण- हामी अब मिटरमै जान्छौं
अब प्रदेश पाँचका सबै विद्यालयमा एउटै किसिमको पोशाक
स्कार्पियोको ठक्करबाट मोटरसाइकल चालकको मृत्यु